Spotify, Aza mitsikilo: Nanatevin-daharana ny fiaraha-mientan’ny mpiangaly mozika miisa 180 sy ny vondrona mpiaro ny zon’olombelona ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2021 4:39 GMT
Tamin'ny 4 Mey, nanatevin-daharana ny fiaraha-mientan'ireo mpiangaly mozika miisa 180 sy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona manerana izao tontolo izao ny Global Voices tamin'ny fandefasana taratasy tany amin'ny Spotify miantso ny orinasa hanao fanoloran-tena ampahibemaso mba tsy hampiasa, hanome lisansa, hivarotra, na haka vola amin'ny patantin'ny teknolojia vaovaon'ny famantaran-teny.
Nilaza ny Spotify fa afaka mamantatra, ankoatra ny zavatra hafa, ny “toetra ara-pihetsehampo, hoe lahy na vavy, ny taona, na ny lantom-peo” mba hanomezana torolàlana momba ny mozika ny teknolojia. Mampidi-doza ity teknolojia ity, manitsakitsaka ny fiainana an-takonana sy zon'olombelona hafa, ary tsy tokony ampidirin'ny Spotify na orinasa hafa.
Tamin'ny 2 Aprily 2021, nandefa taratasy tany amin'ny Spotify ny Access Now niantso ny orinasa hiala amin'ity teknolojia momba ny patanty ity. Tamin'ny 15 Aprily 2021, namaly ny taratasin'ny Access Now ny Spotify, nilaza fa “tsy mbola nampihatra ny teknolojia nofaritana tao amin'ny patanty tamin'ny fitaovana ampiasainay izahay ary tsy mikasa ny hanao izany.”
Na dia faly aza ny fiaraha-mientana nandre fa tsy mikasa ny hametraka ilay teknolojia ny Spotify dia mampametram-panontaniana ny hoe: nahoana ny Spotify no nandinika ny fampiasana azy ? Mety hahazo tombony amin'ny fitaovana fanaraha-maso ny orinasa raha misy orinasa hafa mandefa izany na dia tsy mampiasa ilay teknolojia aza ny Spotify. Tsy azo ekena ny fampiasana an'io teknolojia io.
“Resaka fotsiny ny filazan'ny Spotify fa tsy mikasa ny hampiasa ilay teknolojia manafika mampidi-doza izy ireo,” hoy i Jennifer Brody (izy / azy), tompon'andraikitra amin'ny fisoloana vava Amerikana ao amin'ny Access Now. “Raha tena te hampiseho ny fahavononany hiaro ny zon'olombelona ny Spotify dia tokony hanambara ampahibemaso ny orinasa fa tsy hampiasa, hanome lisansa, hivarotra, na haka vola amin'ny rindrambaiko fitsikilovana manimba izy ireo.”
“Manavakava-bolonkoditra, mankahala olona nanova taovam-pananahana ary mampihoronkoditra tsotra izao ny filazana fa azo fantarina ny fitiavan'ny olona mozika iray amin'ny alàlan'ny lantom-peony na fantarina ny maha-lahy na maha-vavy azy amin'ny alàlan'ny feony,” hoy i Evan Greer, mpiangaly mozika nanao sonia ilay taratasy sady talen'ny Fight for the Future, “Tsy ampy ho an'ny Spotify ny filazana fa tsy mikasa ny hampiasa an'io patanty io ry zareo izao, mila manolotena hamono tanteraka an'ity drafitra ity izy ireo. Tokony hifantoka amin'ny fandoavam-bola ho an'ny mpanakanto amin'ny fomba ara-drariny sy mangarahara izy ireo fa tsy hampivelatra ny teknolojia fanaraha-maso mahafadiranovana. ”
Nanao sonia ilay taratasy ary nilaza i Tom Morello, mpitendry gitaran'ny Rage Against the Machine hoe: “Tsy afaka manala azy ianao rehefa eo ambany fanaraha-mason'ny orinasa tsy tapaka. Mila miala amin'io dieny izao ny Spotify ary manao izay mety amin'ireo mpitendry mozika, mpankafy mozika ary ny mpiasan'ny mozika rehetra. ”
Hoy i Sadie Dupuis ao amin'ny Speedy Ortiz and Sad13, sady mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Mpiangaly Mozika sy ny Mpiasa Mpiara-dia, hoe: “Raha handany vola amin'ny famoronana rindrambaiko fanaraha-maso mampihorohoro ny Spotify dia tokony hifantoka amin'ny fandoavam-bola ho an'ny mpanakanto aloha izy ireo isaky ny rakipeo na horonantsary ary mba hangarahara bebe kokoa momba ny angondrakitra (lahatahiry) izay efa nangoniny tamintsika rehetra.”
“Tsy ampy ny fanomezan-toky fa tsy mikasa hampiasa an'ity teknolojia manafika sy mampatahotra ity ny Spotify amin'izao fotoana izao. Nametraka patanty izy ireo mba hanadihadiana manokana sy hanavahana ny lahy sy ny vavy, ny taonany, ny lantom-peony, sy ny maro hafa ho tombontsoan'ny fanaovana doka sy amin'ny fanaovana ilay sehatra ho mahasarika kokoa. Tokony handà tanteraka ny tolokevitr'ity teknolojia ity ny Spotify ary manolotena tsy hampiasa, hanome lisansa, hivarotra, na haka vola amin'ny patanty famantaram-peo ampiasain'izy ireo mihitsy”, hoy i Lia Holland, talen'ny fampielezan-kevitra sy ny serasera ao amin'ny Fight for the Future. “Hankahalaina sy korontanin'ny kapitalisma mpanara-maso sy ireo maodelin'ny raharaham-barotra fanararaotana apetrak'izy ireo ny firaisa-miasan'ny mpanakanto, mpanao fampisehoana ary fikambanana manerantany. Tokony hanidy ny varavarana amin'ny famantaran-teny ny Spotify ary hanary ny lakile. ”
Vakio ny fiaraha-mientana tao anaty taratasy amin'ny teny Espaniola eto, ka mandraisa anjara amin'ny sonia.